‘म सँग फिल्म निर्देशन गर्ने क्षमता छैन’ : रमेश उप्रेती « Ramailo छ
‘म सँग फिल्म निर्देशन गर्ने क्षमता छैन’ : रमेश उप्रेती
प्रकाशित मिति : Oct 15, 2017
थुप्रै कलाकारले फिल्म निर्देशनमा हात हालेका छन् । केही सफल भएका छन् । केहीले भने असफलतापछि फिल्म निर्देशनलाई रोकेका छन् । हालसालै झरना थापा र दिपाश्री निरौलाले ‘ए मेरो हजुर २’ र ‘छक्का पञ्जा २’ बाट सफलता हात परे ।
यस्तैमा अभिनेता रमेश उप्रेती फिल्म ऐश्वर्य मा मार्फत कम ब्याक भएका छन् । जुन फिल्म कात्तिक ९ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । यसमा उनले अभिनय र लगानीको मात्रै अभिारा लिएका छन् । उनले ऐश्वर्य किन निर्देशन गरेनन् ? रमेश भन्छन्, ‘म सधैं कलाकार हुन चाहान्छु । म कलाकार हुनको लागि मात्रै जन्मेको हुँ ।’ उसो भए कहिल्यै फिल्म निर्देशन नगर्ने त ? रमेशको बुझाइ छ, ‘म भित्र फिल्म निर्देशन गर्ने क्षमता छैन । मैंले जे जानेको छु त्यही गर्छु । फिल्म निर्देशनबारे कहिल्यै सोच्दिनं र गर्दिंन । उनी थप्छन्, रोल सुहाउने फिल्म खेल्छु । फिल्म बनाउँछु ।’ रमेश र दीपिकासँग गरिएको रमााईलो कुराकानी हेर्नुस् :
दिवाकर भट्टराई निर्देशित रमेशले बनाएको ‘ऐश्वर्य’मा उनी सहित केकी अधिकारी, नव नायिका दीपिका प्रसाईं र कलाकार प्रशान्त ताम्राकारको मुख्य भूमिका रहेको छ । फिल्म गीत तथा प्रोमोले चर्चा पाइरहेको छ ।